Monday February 13, 2017 - 08:47:10 in Wararka by Super Admin
Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wuxuu noqday ninkii u horeeyay ee madaxweynaha Soomaaliya ku magacaaban ee Soomaalida tirada yar ee gaalnimadooda cadeysatay si kal iyo laab ah u soo dhaweeyaan.
Waxay muujiyeen jaceylka ay u qabaan iyo sida ay ugu kalsoon yihiin raalina uga yihiin in hoggaanka asiga loo dhiibo.
Muuqaal ay internetka soo dhigeen ayay ku sheegeen in ay ku reja weyn yihiin in uu wax weyn qabto.
Waxaa hadlaya laba nin iyo haweeney ka mid ah kuwa dadka Soomaaliyeed gaalnimada ugu yeera, waxaanay tilmaameen in ay Soomaalida gaalada ah oo dhan wakiil ugu ayihiin hambalyada ay Farmaajo u dirayaan.
Soomaalida qurbaha tagtay qaarka mid ah ayaa horay u gaaloobay kuwaasoo inta kalena baadinimada xeradeeda uga gacan haatinaya, waaan qolyahaas kuwa iminka Farmaajo oo asiga qudhiisu qurba joog ah amaanaya.
Sawirka Cumar Xersi oo Ridoobay.
Dadka filimka Farmaajo lagu ayidayo soo duubay waxay kala yihiin Cumar xirsi, shiine gaaboow iyo shaaniyo gaaboow oo caan ku ah in ay dadka beybalka ugu yeeraan gaar ahaana Soomaalida tahriibtay.
Waxa dad badanu isweydiinayaan waxa keenay in dad Soomaali ah oo diinta islaamka ka baxay rabitaanka intaa la eg u muujiyaan Farmaajo xilli aanay horay us oo hadal qaadin madaxweynayaashii asiga ka horeeyay.
Shiine Gaabow oo ka ridoobay Diinta islaamka.
Su’aashan ayaa dhalineysa su’aalo kale oo la xariira waxa Faraamajo aaminsan yahay iyo cidda uu ka tirsan yahay.
Suldaan Maxamed Garyare oo ka mid ah aqoon yahanada Soomaaliyeed oo ay wareysatay Idaacadda Islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegaya in Farmaajo yahay ninkii ugu diin xumaa ee xilka madaxweynaha Soomaaliya qabta.
Wuxuu xusay in uu ku bar baaray calmaaniyadda maraykanka isla markaana buug uu qoray xilligii jaamacaddii u dambeysay uu ka baxayay ugu gefay Diinta Islaamka uuna ku dhawaaqay erayo diin ka bax ah.
Marka laga soo tago u adeegidda shisheeye iyo ku dhex Milankiisa waxaa jira siyaasiiin badan oo Soomaali ah kuwaasoo la aaminsan yahay in ay haystaan diinta kirishtaanka waxaanay madax sare iyo xubno ka yihiin maamulada Soomaaliya ka jira.